West Ham oo guul soo laabasho ah ka gaartay Chelsea oo marti ugu ahayd London Stadium… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye December 4, 2021
(London) 04 Dis 2021. West Ham ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay Chelsea oo marti ugu ahayd London Stadium, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-2, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Chelsea.
Daqiiqadii 29-aad kooxda Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Thiago Silva waxaana ka caawiyay Mason Mount.
Laakiin 40 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda West Ham United ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii rigoore loo dhigay uu gool u badelay Manuel Lanzini ciyaarta ayaa waxay sidaas ku noqotay barbardhac 1-1 ah.
Daqiiqadii 44-aad kooxda Chelsea ayaa markale hoggaanka u qabatay dheesha iyada oo 1-2 ka dhigay Mason Mount oo caawinta goolka ay kaga timid Hakim Ziyech.
56 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda West Ham United ayaa markale la timid goolka barbardhaca waxaana 2-2 ka dhigay ciyaarta Jarrod Bowen kaddib markii uu goolkan ka caawiyay Vladimír Coufal.
Daqiiqadii 87-aad kooxda West Ham United ayaa markan hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 3-2 laacibkooda Arthur Masuaku.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku dhammaatay 3-2 ay kaga adkaatay West Ham United kooxda Chelsea oo marti ugu ahayd London Stadium, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada Isbuuca 16-aad ee horyaalka Premier League.